लकडाउनमा मधुमेह रोगीका लागि सुझाव - जीवन शैली - प्रकाशितः वैशाख ८, २०७७ - नारी
प्रस्तुती– उपासना घिमिरे
डा. ज्योति भट्टराई, इन्डोक्राइनोलोजिस्ट, मेट्रो काठमाडौं हस्पिटल
कोरोना भाइरसको संत्रासले भएको लकडाउनले धेरैलाई असर गरेको छ । अझ नियमित रुपमा चिकित्सकसंग परामर्श गर्नु पर्ने र नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने विमारीहरुलाई थप अन्यौल गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा अन्य रोगका दिर्घ रोगिहरुलाई अस्पताल जानु थप खतरा देखिने हुनाले धेरै अस्पतालहरुले ओपिडी सेवालाई बन्द गरेर अनलाईन मार्फत् परामर्श दिन थालेका छन् ।
अस्वस्थ जीवन शैली र अव्यवस्थित खानपानका कारण रक्तचाप, मधुमेह, कोलस्टेरोल, मुटुरोगका बिरामीको संख्या धेरै रहेका छन् । अहिले लकडाउनका कारण धेरै बिरामी औषधी सिद्धिएर फलोअपमा जान पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा बिरामीले औषधी १–२ महिना आफैंले थप गरी नछुटाई सेवन गरेमा फरक नपर्ने चिकित्सक बताउँछन् । अहिलेको लकडाउनमा मधुमेह रोगीले कसरी आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्ने भन्ने विषयमा डा. ज्योति भट्टराईको ले दिनु भएको सुझाव :
विश्वमा ८ दशमलव ६ प्रतिशत मानिसलाई मधुमेह रोग लागेको अनुमान गरिन्छ । नेपालमा पनि स्वस्थ जीवनशैली तथा अव्यवस्थित खानपानकै कारण यसका रोगी बढेका छन् । अहिले विश्वमा कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को महामारी फैलिएको कारण, मधुमेहका बिरामीलाई कोरोनाको संक्रमण भएमा उपचार जटिल हुने देखिन्छ । किनकी मधुमेहका बिरामीको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ । अहिलेको सबैको दिनचर्या घरमै बस्ने खाने बनेको छ ।
यस्तो अवस्थामा मधुमेहका बिरामीले स्वास्थ्यको ख्याल राख्दै प्रत्येक दिन व्यायाम गर्नुपर्छ । उठबस, नाचगान गरेर मांशपेशी चलायमान बनाउनुपर्छ । प्रत्येक २० मिनेटमा यताउता हिड्डुल गर्नुपर्छ । यसो गरेमा शरीर छरितो हुनुका साथै शरीरमा चिनीको मात्रा बढ्न पाउँदैन । मधुमेहका बिरामीले व्यायामको साथै खानपानमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । अहिले सागसब्जी पनि सजिलै पाइरहेको छ ।
एक कचौरा अन्नको साथमा हरियो तरकारी, गेडागुडी तथा दाल खान सकिन्छ । दिनमा चारपटक ठिक्क मात्रामा खानेकुरा खाइरहनुपर्छ । औषधी नछुटाई सेवन गर्नुपर्छ । इन्सुलिन लगाउने बिरामीले पनि छुटाउनुहुँदैन । समय–समयमा सुगर जाँच्ने यन्त्र (ग्लुकोमिटर) ले जाँच गर्नुपर्छ । औषधी सेवन गरेकाले हप्तामा एकपटक र इन्सुलिन लगाएकाले हप्तामा तीनपटक मनिटरि¨ गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
इन्सुलिन लिइरहेकाले खाली पेटमा र खानापछि चेक गर्नु वेश हुन्छ । सुगर लेवल कम भएर हात खुट्टा लुलो भयो, मुख सुख्खा भयो भने ग्लुकोज पानी वा चकलेट खानुपर्छ । संभव नभए पानीमा चार चिया चम्चा चिनी घोलेर पनि सेवन गर्न सकिन्छ । धेरै अप्ठ्यारो भयो भने आफूले नियमित रुपमा जाँच गराइरहेको चिकित्सकसँग फोन तथा अनलाइनका माध्यमबाट परामर्श लिन सकिन्छ । अहिले त्रासमय वातावरण भएपनि मधुमेहका बिरामी घरमै बस्नुपर्दा दिक्क महसुस गरी तनाव लिनुहुँदैन ।
किनकी तनावले सुगर बढाउँछ । जतिबेला पनि अनुहारमा हात लैजानु हुँदैन । घरभित्र मास्क लगाउनु जरुरी हुँदैन बाहिर निस्कदा मात्र लगाए हुन्छ । संसारले भोगको कुरा म पनि भोग्न तयार छु भन्ने मनस्थिति बनाउनुपर्छ । सकारात्मक कुरा सोची घरमै बसी स्वस्थ जीवनयापन गर्नु नै अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त हुन्छ ।